अर्ध-ब्ल्याकआउट MagicalTex निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन अर्ध-ब्ल्याकआउट MagicalTex कारखाना
चीन थोक पॉलिएस्टर सेमी ब्लैकआउट कपडा
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड कपडा उच्च शक्ति संग पॉलिएस्टर बाट बनेको छ। यो अर्ध ब्ल्याकआउट हो जसले तपाईंको गोपनीयता अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न सक्छ। हाम्रो फेब्रिकमा कम ब्रेक रेट छ, जसले कपडामा कुनै त्रुटि नभएको निश्चित गर्न सक्दछ। बाक्लो चाँदी कोटेड पूर्ण शेडिंग पछाडिको कपडा चाँदी कोटेड, वाटरप्रूफ र तेल प्रूफ र सफा गर्न सजिलो छ। हामी तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारको प्रस्ताव गर्न सक्छौं। यो स्कूल, घर र कार्यालय प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ।
हामी १ professional बर्ष भन्दा बढीको लागि ब्लाइन्डमा एक पेशेवर निर्माता हो। हाम्रो लक्ष्य हाम्रो ग्राहकहरु को लागी एक सुविधाजनक एक स्टप खरीद हो। हामी केवल हाम्रो ग्राहकहरु लाई सही कपडा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्छौं। हामीसँग सानो MOQ छ, तपाईंको मात्रा ठूलो वा सानो भए पनि हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछौं। हामी तपाईंलाई पहिलो सहयोगका लागि नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
शास्त्रीय पर्दा अंधा कपडा ब्लैकआउट
MagicalTex Motorized Windows Shutters Blinds Fabric राम्रो गुणमा पॉलिएस्टरले बनेको छ। समाप्त उत्पाद हाम्रो मुख्य व्यवसाय को एक हो। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न र colorsहरू र फरक चौडाइहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति र राम्रो गुण हुन्छ। हाम्रो कपडाको तेल प्रूफ र वाटरप्रूफ हुन्छ, यसलाई सफा गर्न सजिलो हुन्छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावाइलेशन प्रभाव छ। घर र कार्यालय प्रयोगको लागि उपयुक्त।
हामीसँग २०० भन्दा बढी देशहरूमा ब्लाइन्ड कपडा र बिक्री उत्पादनहरूमा १ 16 बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ। हामी निर्माताहरू हौं, हामी हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सिधै सामानहरू बेच्छौं, यसले तपाईंलाई मध्यवर्ती खर्चहरू छोडिदिन मद्दत गर्दछ। हाम्रो उद्देश्य तपाईंको जीवनलाई अझ राम्रो बनाउने हो। राम्रो गुण र सबै भन्दा राम्रो सेवा टीम को साथ, हामी हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छौं।
पर्दा फैब्रिक सेमी ब्ल्याकआउट कपडा व्हाइट कोटिंग
मिजिकलटेक्स रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा राम्रो गुणमा पॉलिएस्टरबाट बनेको हुन्छ। पॉलिस्टर यार्न १००% नयाँ हो, र हनीवेलबाट सबै आयात गरियो, जसले यसले उत्कृष्ट गुण बनाउँछ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न र colorsहरू र फरक चौडाइहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति र राम्रो गुण हुन्छ। यो फ्रेन्च विन्डोको लागि उपयुक्त छ। तपाईंसँग फरक स्थापना विधि हुन सक्दछ, जस्तै छत स्थापना, बाह्य स्थापना, साइड स्थापना र यस्तै।
हाम्रा उत्पादनहरू तपाईंको जीवनलाई राम्रो बनाउने लक्ष्य राख्छन्। हाम्रो उत्पादनहरू दबाब प्रतिरोध र लामो सेवा जीवन हो, कारीगरी को मामला मा धेरै सावधान छ, छायांकन प्रभाव पनि धेरै राम्रो छ, ढाँचा धेरै राम्रो देखिन्छ, सरल र स्टाइलिश वातावरण। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, र यदि तपाईंको अर्डर सानो छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीसँग तातो बिक्री हुने सामानहरूको लागि सामान्य स्टक छ। सस्तो मूल्यको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा ग्राहकहरू बीच लोकप्रिय छन्। हामी निःशुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
अनुकूलित डिजाइन अर्ध-ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड कपडा वाटरप्रूफ र राम्रो गुणमा आगो निवारक हो। हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावावास प्रभाव छ। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि बिभिन्न रंगहरू छन्, तपाईं कुनै एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड कपडा तपाईंको जीवनलाई अझ राम्रो बनाउने लक्ष्य हो। हाम्रो उत्पादनहरू दबाब प्रतिरोध र लामो सेवा जीवन हो, कारीगरी को मामला मा धेरै सावधान छ, छायांकन प्रभाव पनि धेरै राम्रो छ, ढाँचा धेरै राम्रो देखिन्छ, सरल र स्टाइलिश वातावरण, स्थापना गर्न सजिलो। सस्तो मूल्यको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा ग्राहकहरू बीच लोकप्रिय छन्। र हामी अनुकूलित व्यापार गर्न सक्छौं। पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
अनुकूलित विन्डो ब्लाइन्ड रोलर कपड़ा सेमी ब्लाकआउट
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड कपडा पॉलिएस्टर बाट बनेको छ। यो सेमी ब्ल्याकआउट हो जसले तपाईंको गोपनीयता अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न सक्छ। हामी तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारको प्रस्ताव गर्न सक्छौं। यो स्कूल, घर र कार्यालय प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ। हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावावास प्रभाव छ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको ग्राहकहरूको विन्डो साइजको आवश्यकता अनुसार हाम्रा ग्राहकहरूलाई सबैभन्दा उचित पर्दा समाधान प्रस्ताव गर्नु हो। हामी तपाईंलाई उत्तम फेसन समाधान प्रदान गर्न सक्छौं। हामीसँग सानो MOQ छ, हामीसँग हाम्रा अधिकांश उत्पादनहरूको लागि स्टक छ, हामी तपाईंलाई चाँडै ढुवानी मिलाउन सक्छौं। हामी विश्व भर मा ग्राहकहरु को लागी स्थापना निर्देशन निर्देशन प्रदान गर्न सक्दछौं।
MagicalTex इको-मैत्री रोलर कपड़ा पॉलिएस्टर सेमी ब्ल्याकआउट पॉलिएस्टरको बनेको छ। यो सेमी ब्ल्याकआउट हो जसले तपाईंको गोपनीयता अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न सक्छ। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट। हामी तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारको प्रस्ताव गर्न सक्छौं, तपाईं कुनै एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कूल, घर र कार्यालय प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ।
उन्नत उत्पादन विधिको साथ, हाम्रो उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धी हो, हामी हाम्रा सबै उत्पादनहरूको लागि १००% निरीक्षण गर्दछौं। उत्पादन अवधि 30० दिन लाग्न सक्छ। हामीसँग स्टॉक छ भने हामी वितरणको छिटो प्रबन्ध गर्न सक्दछौं। हामी wholesales कारखाना हो, हाम्रो उत्पादनहरू राम्रो गुणमा छन् र मूल्य प्रतिस्पर्धी हो। र हामीसँग कम MOQ छ। पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
MagicalTex Semi Blackout रोलर ब्लाइन्ड कपडा राम्रो गुणमा पॉलिएस्टरको बनेको हुन्छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि बिभिन्न रंगहरू छन्, तपाईं कुनै एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, ती सुन्दर, उदार र विलासी हुन्। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट।
MagicalTex ब्लैकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा वाटरप्रूफ र राम्रो गुणमा आगो निवारक हो। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि बिभिन्न रंगहरू छन्, तपाईं कुनै एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अनुकूलित व्यापार गर्न सक्छौं। हामी निर्माताहरू हौं, हामी हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सिधै सामानहरू बेच्छौं, यसले तपाईंलाई मध्यवर्ती खर्चहरू छोडिदिन मद्दत गर्दछ। पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
उच्च गुणवत्ता बाल्कनी ब्लाइन्ड्स कपड़ा सेमी ब्ल्याकआउट
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा सेमी ब्ल्याकआउट श्रृंखला उत्पादनहरू उच्च गुणवत्ताको साथ पॉलिएस्टरले बनेको हुन्छ। हामी विभिन्न कोटिंग विधिका साथ जैकवर्ड कपडाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। डबल अनुहार डुबाउने कोटिंग विधिले सेमी ब्ल्याकआउट कपडाहरू, फोम सेतो कोटिंग विधिले ब्ल्याकआउट कपडा बनाउन सक्छ। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट। हाम्रो उत्पादनहरू स्कूल, कार्यालय र घरको लागि उपयुक्त छन्। तपाईका सन्देशहरुलाई स्वागत छ!
हाम्रो कपडा आगो निवारण र जलरोधक हो, यो NFPA701 पास गर्न सक्दछ(संयुक्त राज्य अमेरिका)प्रमाणीकरण, र रंग स्थिरता यदि ग्रेड 4.5.।। उच्च गुणस्तरको कच्चा पॉलिएस्टर सामग्रीले हाम्रो कपडालाई हाम्रा ग्राहकहरू बीच लोकप्रिय बनाउँछ। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, तिनीहरूलाई उत्पादन गर्न it० दिनको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाइँको अर्डर सानो छ, डोनचिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग तातो बेच्ने वस्तुहरूका लागि सामान्य स्टक छ। हामी तपाईंको गुणवत्ता र रंग जाँच गर्नका लागि नि: शुल्क नमूनेहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
तातो बिक्री रोलर ब्लाइन्ड कपडा डबल फेस डिप कोटी
MagicalTex Semi ब्लैकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा शीर्ष गुण र राम्रो वर्णहरूको साथ पॉलिएस्टरबाट बनेको हुन्छ। डबल अनुहार र color्ग गोंद कोटिंग विधिको साथ यसले प्रकाश र व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षा राख्नमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। राम्रो गुणस्तरको पॉलिएस्टर सामग्रीले यसलाई टिकाऊ बनाउन सक्दछ, कुनै मोल्ड, कुनै पतंग, कुनै विरूपण, लामो समय उपयोग पछि कुनै ट्र्याक।
नयाँ डिजाइन पर्दा ब्लाइन्ड कपडा सेमी ब्ल्याकआउट
MagicalTex New Design पर्दा ब्लाइन्ड सेमी ब्ल्याकआउट फैब्रिक पॉलिएस्टरले बनेको छ। फोम सेतो कोटिंगले यसले सेमी ब्ल्याकआउट मात्र बनाउँदछ, तर राम्रो लुक पनि छ। वातावरणीय मैत्री कपडाहरू, गैर-विषाक्त र स्वादहीनको साथ अपनाइएको जुन तपाईंलाई आरामदायक वातावरण बनाउँदछ। यो फ्रेन्च विन्डोको लागि उपयुक्त छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न र colorsहरू र फरक चौडाइहरू छन्। र हामी OEM व्यापार गर्न सक्छौं। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ।
MagicalTex New Design पर्दा ब्लाइन्ड ब्ल्याकआउट फैब्रिक हाम्रो मौन ब्लाइन्ड मध्ये एक हो। यसले तपाईंको शान्त वातावरण राख्न सक्छ। घर र कार्यालय प्रयोगको लागि उपयुक्त। हाम्रो कपडा वाटरप्रूफ र आगो निवारण हो। हामी हाम्रो आइटम को लागी १० बर्षे वारेन्टी प्रदान गर्दछौं। र पहिलो सहयोगका लागि हामी तपाईंलाई नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।